स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives – Page 180 of 182 – Samacharpati Samacharpati स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives – Page 180 of 182 – Samacharpati
काठमान्डाैँ, १३ असाेज । दशैं भन्नासाथ दूर्गापूजाको कल्पना हाम्रो दिमागमा आइहाल्छ । दशैंका नौ दिनभरी विभिन्न देवीहरुको पूजा आराधना गछौं । देवीको दर्शनका लागि विभिन्न मन्दिरहरु जान्छौं । यसको पनि एउटा छुट्टै महत्व र रमाइलो पक्ष छ । दशैंको सुरुवात घटस्थापनाबाट नै हुन्छ, यसदिन हामी आफ्नो घर–घरमा जमरा राख्ने, देवीहरुको पूजापाठ गर्नेगर्छौं । दशैंका नौ दिनसम्म हामी […]
पाेखरा, १३ असाेज । हुन त दुध पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर नेशनल इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद, निखिल शर्माका अनुसार बिहानको तुलनामा राती दुध पिउँदा थुप्रै हर्मोनले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दछ । विशेषगरी पुरुषमा यसको असर धेरै हुन्छ । दुधमा ट्रिप्टोफेन नामको तत्व पाइन्ट जसले शरिरलाई रिल्याक्स बनाउँछ । राती सुत्नुभन्दा पहिले दुध पिउँदा […]
काठमान्डाैँ, १३ असाेज । नेपालीको महानपर्व दशैँ, तिहारमा स्वास्थ्यसेवा विगत वर्षमा जस्तै निरन्तरता हुने भएको छ । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दशैँ र तिहारका सार्वजनिक बिदाका समयमा पनि स्वास्थ्यसेवा सूचारु राख्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जगतप्रसाद भुषालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय निकायका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका […]
पाेखरा, १३ असाेज । टाउको दुख्यो, कम्मर चस्कियो या कुनै सामान्य घाउचोट लाग्यो भने मानिस उपचार गर्छ वा स्वास्थ्यमा समस्या भएको रूपमा लिन्छ । रुघाखोकी लाग्दा पनि मानिस ठूलै समस्याका रूपमा लिन्छन् । मानिसको अन्य स्वास्थ्यजस्तै दाँत स्वास्थ्य पनि महत्वपूर्ण हो । दाँत कीराले खानु, गिजा सुन्निनु, पाक्नु, पिप वा रगत आउनु, गिजा पाक्नु र […]
जान्नुहाेस ! कस्ता व्यक्तिलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ ?
पाेखरा, १३ असाेज । लामखुट्टे सामान्यतया मनसुन लगतै देखिने गरेता पनि नेपालको खासगरी तराईतिर लगभग बाह्रै महिना देखिने गर्छ । नेपालमा वर्षेनी लामखुट्टेको टोकाईबाट डेंगुको प्रकोप देखिने, वेस्टनाईल भाइरस देखा परिसकेको अवस्था छ । चिकनगुनिया बढ्दो क्रममा देखिंदै गएको र जिका भाइरसको सम्भावना अति प्रबल (जाँच नियमित नहुने भएकोले आधारभूत स्थिति थाहा नभएको) भएकोले कस्ता व्यक्ति […]
पुस्तौं पुस्तासम्मलाई दुख दिने, यास्ता छन् रोगहरु जान्नुहोस ! ति रोगहरुको बारेमा
काठमान्डौँ, १२ असोज । धेरैलाई अनुवांशिक रोगको समस्याले सताईरहेको हुनसक्छ । पुस्ताहरुलाई लागेको रोग उनको सन्ततीलाई समेत लाग्नु नै अनुवांशिक रोगको मूल विशेषता हो । यो पूर्खाको वंश वा जीनको माध्यमबाट अर्काे पुस्तामा सर्ने गर्दछ । अनुवांशिक रोगहरु पनि कुनै सामान्य स्वभावका हुन्छन् भने कुनै मानिसको ज्यानै लिने स्वभावका समेत हुन्छन् । जस्तो हाम्रो गुणहरु […]
यस्ता छन् दमका कारण, लक्षण र उपचार ! दम रोग के हो ? उपचार कसरी गर्ने ! हेर्नुहोस जानकारी लिनुहोस्
पोखरा, १२ असोज । आस्थमा भनेको श्वास प्रश्वाससित सम्बन्धित एउटा रोग हो । वातावरणीय प्रदुषण, धुवाँ धुलो, चिसो तथा फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणबाट हुने विभिन्न एलर्जीका कारण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई आस्थमा हुन सक्दछ । यदि कसैलाई एलर्जी छ र त्यो लामो समयसम्म रहृयो भने मानिसलाई आस्थमा हुने गर्दछ । आस्थमामा श्वास प्रश्वासका […]